Nhau - Dzakakosha nhungamiro yekuchenesa JR-D120 Frozen nyama grinder nenzira kwayo
Jr-d120 chishandiso chakakurumbira, asi pese paunobata nyama mbishi, kuchenesa kunodiwa kudzivirira mabhakitiriya uye mabhakitiriya kubva kumasara. Zvisinei, kuchenesa grinder yako hakuna kusiyana nekuchenesa vamwe vabiki. Mushure meizvozvo, kuchengetwa kwakaringana kwezvinhu zvaro kunobatsira kuona kuti inochengetedzwa zvakanaka (saka kashoma kukonzeresa kuvhiringidzika mukushandisa) Kutevera mamwe matipi ekuwedzera kana uchishandisa kuchabatsira zvakare kuona kuchenesa kuri nyore.
Ruoko geza rako rakagwamba nyama grinder
1. Chenesa nekukurumidza mushure mekushandisa.
Nyama ichipfuura nepakati peguyo rako, inotarisirwa kusiya mafuta nemafuta (uye imwe nyama yakapararira) .Kana nguva ichibvumidza, vanozoomesa uye ganda, saka usamirira kwenguva refu kuti ugeze. Bata iyo munguva mushure mekushandisa kwega kwega kuti hupenyu huve nyore.
2. Isa chingwa muchigayo.
Tora zvidimbu zviviri kana zvitatu zvechingwa usati wabvarura muchina. Vape chikafu nekukuya senge nyama yako. Vashandise kutora mafuta uye mafuta kubva munyama uye kusvina chero marara akasara mumushini.
3. Bvisa Shijiazhuang chando nyama grinder.
Kutanga, kana muchina uri wemagetsi, chibatanidze. Wobva waparadzanisa kuita zvikamu zvinoverengeka. Izvi zvinogona kusiyana nemhando uye modhi, asi kazhinji iyo yekukuya nyama inosanganisira:
Pusher, feed pombi uye hopper (kazhinji chidimbu chenyama chinodyiswa mumushini kuburikidza nacho).
Screw (inomanikidza nyama kuburikidza nezvikamu zvemukati zvemuchina).
Ndiro kana chakuvhuvhu (chidimbu chesimbi chakapetwa panobva nyama).
Nereza uye ndiro kavha.
4. Soak zvikamu.
Zadza singi kana bhagidhi nemvura inodziya uye wedzera imwe yekuwachisa sipo. Kana wazara, isa zvikamu zvakabviswa mukati. Regai vagare kweinenge kota yeawa uye vazorodze chero mafuta akasara, mafuta kana nyama.
Kana grinder yako iri yemagetsi, usanyorovese chero magetsi zvikamu. Pane kudaro, shandisa nguva ino kupukuta kunze kwechigadziko nemucheka wakanyorova uye wobva waoma nejira nyowani.
5. Tsvaira zvikamu.
Shenesa screws, makavha uye mashizha nesiponji. Ive nekuchengera kana uchibata banga nekuti rakapinza uye zviri nyore kukucheka kana ukasaribata zvakanaka. Chinja kubhurosi remabhodhoro kuti uchenese mukati mefayipi pombi, hopper uye gomba reburi. Kana wapedza, sukurudza chikamu chimwe nechimwe nemvura yakachena.
Usamhanye nenzira iyi. Iwe unoda kubvisa zvese zvinoteedzerwa kuti urege kuve nzvimbo yekuberekera mabhakitiriya. Saka kana iwe uchinge wafunga kuti wakakwesha zvakakwana, kwesha zvishoma.
6. Dry zvikamu.
Kutanga, dziomese netauro rakaoma kuti ubvise mwando wakawandisa. Wobva waomesa pajira nyowani kana pawaya rack. Mirira vanokuya kuti vaome vasati vaisa munzvimbo yekudzivirira ngura uye oxidation.